Magaalaa Jigjigaa Kaaba gama bahaa dugdee magaalattii-tti mana hidhaa tokkotu jira. “Jail Ogaden” jedhamuun beekama. Manni hidhaa kun bal’aa miti. Akka karoorfametti silaa namoonni 400 ol kan keessatti hidhaman hin turre.
Xayyaara Indoneshiyaa Maaltu Kuffise?
Danqaa Umameef Prezidaantii Yukreentu Itti Gaafatama : Prezidaant Putiin
Poolisiin Keeniyaa Lammilee Chaaynaa Hanna Tikeeta Baaburaa Geejjibaa Keessaa Harka Qabu Jedhee Shakke To’ate